News Collection: 'नम्रताको ... हेर्दा घिन लाग्यो'
'नम्रताको ... हेर्दा घिन लाग्यो'
सबिना कार्की, मोडल/नायिका
चैत १७ गतेबाट देशव्यापी प्रदर्शन हुने चलचित्र 'दुलही रानी' बाट एउटी रानीले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा पाइला टेक्दै छिन्। ती सम्भावना बोकेकी रानी हुन्, सविना कार्की। त्यसो त उनले आधादर्जन म्युजिक भिडियो तथा केही टेलिसिरियलमा पनि आफ्नो क्षमता देखाइसकेकी छिन्। सरल स्वभावकी सविना नृत्यमा पनि निकै पोख्त छिन्। प्रचुर आत्मविश्वास भएर नै उनी अभिनयलाई शौखको रूपमा मात्र नलिई पेशा नै बनाउने मुडमा छिन्। उनै नायिका सविनासँग गरिएको छोटो कुराकानीः
हिरोइन् बन्ने सपना कहिलेदेखिको हो?
–खासमा म हिरोइनभन्दा पनि कलाकार बन्न चाहन्छु। यो मेरो बच्चादेखिकै सपना हो। सानोमा टिभी हेर्दा पनि मनमनै 'एकदिन यस्तै कलाकार बनेर टिभीमा देखिन्छु' भन्ने सोच्थें। अहिले त्यो सपना पूरा गर्न सङ्घर्ष गर्दैछु।
तपाईंको 'डेब्यु मूभि' 'दुलही रानी' को बारेमा केही बताइदिनुस् न।
–यो विशुद्ध पारिवारिक चलचित्र हो। जहाँ दर्शकले लभ स्टोरी, कमेडी, एक्सन सबैकुरा एकसाथ पाउनुहुनेछ।
–यसमा म एउटी सोझी गाउँले केटीको भूमिकामा देखिएकी छु। जो अरूको बारेमा कहिल्यै नराम्रो सोच्दिनँ।
देख्दा त तपाई निकै सेक्सी देखिनुहुन्छ तर फिल्ममा चाहिँ सोझी केटीको भूमिकामा?
–एउटा कलाकार भएपछि सबैखालको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। तर, साँच्चैभन्दा म आफैंलाई पनि तपार्इंले भनेजस्तै 'हट एण्डी सेक्सी' भूमिकामा देखिन मन छ।
कुनै निर्देशकले बेश्याको भूमिकाका लागि अफर गर्‍यो भने खेल्नुहुन्छ?
–'अफकोर्स' खेल्छु। त्यो मेरा लागि अवसर र चुनौती दुवै हुनेछ।
सक्षम नायिकाका लागि के–के गुणहरू अनिवार्य हुन्छ?
–एक्टिङ र डान्स त राम्रो हुनैपर्छ। त्यससँगै, ग्ल्यामर क्षेत्र भएकाले गुड फिगर हुनु जरुरी छ।
तपाईंमा चाहिँ ती गुणहरू कतिको छन्?
–भएरै त यो फिल्डमा आएकी हुँ नि। तर, कतिपय कुराहरू काम गर्दै जाँदा सिकिन्छ।
तपाईंको नजरमा सम्भावना बोकेका दुई नायिका?
–हुन त सबै नायिकाहरू उत्तिकै सवल र सक्षम छन्। यद्यपी, मलाई केकी अधिकारी र रागिनी खड्कीले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याउन सक्छन् जस्तो लाग्छ।
नायकमा चाहिँ को–को मन पर्छ?
–आर्यन सिग्देल र राजेश हमाल।
–आर्यनसँग 'पर्सनालिटी' निकै राम्रो छ भने राजेश हमाल एउटा हिरोका लागि आवश्यक पर्ने सबै गुणहरूले भरिनुभएको छ।
यी दुईमध्ये कसको अपोजिटमा देखिन चाहनु हुन्छ?
–मन त यी दुई मात्र होइन्, सबै एक्टरसँग काम गर्ने मन छ। तर, छान्नै पर्दा चाहिँ राजेश हमाल।
राजेशको गर्लफ्रेन्ड, श्रीमती वा बहिनी के बनेर खेल्ने इच्छा छ?
–बाउ! (एक्साइटेड हुँदै) गर्लफ्रेन्ड नि!
थोरै प्रसङ्ग बदलौं ऐनामा आफ्नो मुहार देख्दा कत्तिको राम्री लाग्छ?
–त्यति धेरै चाहिँ होइन्, सुहाउँदो राम्री छुजस्तो लाग्छ।
सबैभन्दा मन पर्ने आफ्नो अंग?
–म आफूलाई चाहिँ ओठ निकै राम्रो लाग्छ। तर, धेरै साथीहरू मेरो दाँतको खुब प्रशंसा गर्छन्।
–दुई आत्माको मिलन। संसारको सबैभन्दा पवित्र सम्बन्ध।
मान्छेले सेक्स किन गर्छन्?
–पहिलो कुरा त, मानवीय जीवन वा पुस्तालाई निरन्तरता दिन पनि सेक्स गर्नुपर्छ। दोस्रो, प्रकृतिले दिएको यो अनुपम उपहारबाट चरम सन्तुष्टि र आनन्द पाइने भएकाले पनि मान्छेले सेक्स गर्छन्।
तपाईंले चाहिँ त्यस्तो 'चरम सन्तुष्टि र आनन्द' को अनुभव गर्नुभएको छ?
–छैन्। मलाई विवाह अगाडिको सेक्स वाहीयात लाग्छ।
तर मन मिलेपछि 'सेक्स इज नथिङ' भन्छन् नि?
–अरूका लागि होला तर मलाई त्यस्तो मन पर्दैन। फेरि मन त धेरैसँग मिल्ला, त्यसो हो भने सबैसँग सेक्स गर्न सकिन्छ त?
साँच्चै, ब्लु फिल्म हेर्नुभएको छ?
–अँ, नम्रता श्रेष्ठको हेरेको छु। तर, त्यो नै मेरो पहिलो र अन्तिम थियो।
कस्तो लाग्यो त त्यो भिडियो?
–छि! कस्तो घिन लाग्यो? साथै एउटा कलाकार भएको नाताले अर्को कलाकारको सेक्स भिडियो बाहिर आउँदा निकै दुःख पनि लाग्यो।